Microsoft Shared View - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
31-03-2011, 06:08 PM
Network တစ်ခုတည်းမှာ သုံးတဲ့ Netmeeting လိုပုံမျိုးပေါ့.. ဒီတော့ အွန်လိုင်းကနေ presentation ပြတာမျိုးတို့ ကိုယ့် စက်မှာ လုပ်ထားတာတွေ ပြချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကောင်လေး သုံးလို့ရတာပေါ့.. ဒီ share view သုံးချင်တဲ့သူတွေ အတွက်ကတော့ SharedView.msi နဲ့ Window Live ID (Presentor(Organizer) လုပ်မယ်ဆိုရင်) လိုအပ်ပါတယ်.. ဒါတွေ ပြည့်စုံပြီဆိုရင်တော့ ဒီ feature ကိုသုံးလို့ရပါပြီ.. အသုံးပြုရတာကတော့ လွယ်ပါတယ်..
- Presentor(Organizer) ဘက်က SharedView ကို run ပြီးတော့ Sign-in ၀င်လိုက်ပါ.. (Window Live ID အသုံးပြုပြီး ၀င်ရပါမယ်) ပြီးရင် Startanew Session ထဲမှာ Start နဲ့ Session တစ်ခုဖန်တီးလိုက်ပါ..
- ပြီးသွားရင် SharedView ရဲ့ menu bar မှာရှိတဲ့ Share ကနေပြီး ကိုယ်ဘာကို share ပြချင်တာလည်း ရွေးပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Start ကိုနှိပ်လိုက်ပါ.. Message box ကျလာရင် OK ပေးလိုက်ပါ..
- ပြီးရင် ပုံမှာ အနီရောင် လေးထောင်ဘောင်ခတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း name နဲ့ password ကိုတစ်ခြား Participant တွေဆီပေးလိုက်ပါ.. (Password ပေးရလို့ မစိုးရိမ်ပါနဲ့ ဒီ password က Session တစ်ခုဖန်တီးတိုင်း အလိုလိုဖန်တီးပေးတဲ့ password ပါ.. နောက်တစ်ကြိမ်ဆို နောက်တစ်ခုပြောင်းနိုင်ပါတယ်..) ဒါဆို Presentor(Organizer) ဘက်ကအပိုင်း ပြီးသွားပါပြီ..
Participant အနေနဲ့ SharedView ကို run ပြီး Joinasession ထဲမှာ Presentor(Organizer) ပေးတဲ့ username နဲ့ password ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Join လိုက်ပါ..
- ပြီးရင် Participant ဘက်က Presentor(Organizer) ရဲ့ Screen ကိုမြင်ရပါပြီ.. အောက်မှာ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီး သူနဲ့ စမ်းထားတာပါ.. သူ့ဆီမှာပေါ်နေတာ ကျနော့် စက်မှာ သုံးနေတာတွေပေါ့..။
ဒီနည်းက Presentor(Organizer) တစ်ယောက်နဲ့ Participant အနည်းဆုံး တစ်ယောက်ရှိမှ သုံးလို့ရမှာ ဖြစ်လို့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်တော့ နည်းနည်း ခက်ခဲမယ် ထင်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်လိုအပ်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ တော်တော်အသုံးဝင်တဲ့ fearute လေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, bagothar85, g00gle, minthumon, PyaitSone, wunna313
Windows OS ဖြစ်စဉ်များ မိုးလွင် အထွေထွေဗဟုသုတ 1 02-05-2009 07:44 AM